Umaka: Isithombe | Martech Zone
Kungani i-infographics ithandwa kangaka? Ukusikisela: Okuqukethwe, Usesho, Okomphakathi, nokuguqulwa!
NgoMgqibelo, ngoMashi 6, 2021 NgoMgqibelo, ngoMashi 6, 2021 Douglas Karr
Abaningi benu bavakashela ibhulogi yethu ngenxa yomzamo ongaguquguquki engiwenzayo ekwabelaneni nge-infographics yokumaketha. Kalula nje… Ngiyabathanda futhi badume ngendlela emangalisayo. Kunezizathu eziningana zokuthi kungani i-infographics isebenza kahle ngamasu wokukhangisa ngedijithali yamabhizinisi: Okubonakalayo - Ingxenye yobuchopho bethu inikelwe umbono futhi i-90% yolwazi esilugcinayo luyabonakala. Imifanekiso, amagrafu, nezithombe konke kuyizindlela ezibucayi zokuxhumana nomthengi wakho. 65%
38 Amaphutha Wokumaketha nge-imeyili Ukuhlola Ngaphambi Kokuchofoza Thumela
NgoMsombuluko, Mashi 16, 2020 NgoMsombuluko, Agasti 23, 2021 Douglas Karr
Kunamaphutha amaningi ongawenza ngohlelo lwakho lonke lokumaketha i-imeyili… kepha le infographic evela kuma-imeyili Monks igxile kulawo maphutha we-ridonculous esiwenza ngaphambi kokuchofoza ukuthumela. Uzobona ukushiwo okumbalwa kozakwethu ku-250ok ekusebenzeni kokuklama nokulethwa. Ake singene ngqo: Ukuhlolwa Kokulethwa Ngaphambi kokuba siqale, ingabe simiselwe ukwehluleka noma impumelelo? Abaxhasi bethu ku-250ok banesisombululo esimangalisayo esingasiza
Ungasheshisa Kanjani Indawo Yakho Ye-WordPress
NgoLwesithathu, Januwari 30, 2019 NgoLwesithathu, Februwari 6, 2019 Douglas Karr
Sibhale, ngezinga elikhulu, umthelela wejubane ekuziphatheni kwabasebenzisi bakho. Futhi-ke, uma kukhona umthelela ekuziphatheni komsebenzisi, kukhona umthelela ekusebenzeni kwenjini yokusesha. Iningi labantu aliqapheli inani lezinto ezihilelekile enqubweni elula yokuthayipha ekhasini lewebhu nokuthi lelo umthwalo wekhasi likunikeze. Manje njengoba ingxenye cishe yawo wonke amasayithi traffic is mobile, kubalulekile futhi ukuthi ube engasindi, ngokushesha okukhulu
Zibaluleke Kangakanani Izithombe Kokuqukethwe Kwakho Kwedijithali?
NgoLwesithathu, Okthoba 3, 2018 NgoMgqibelo, ngoFebhuwari 13, 2021 Douglas Karr
Izithombe ziyisihlukanisi esiyinhloko esisisebenzisayo kuzo zonke izingcezu zamasu wokuqukethwe engiwasebenzela amaklayenti ethu. Sisebenzisa imali eningi, nangaphezulu, ekwakhiweni kwezithombe nakubathwebuli bezithombe kunalokho esikwenzayo ocwaningweni nasekubhaleni. Futhi inzuzo ekutshalweni kwemali ihlala ikhokha. Ngokucacile ezithombeni, akunangqondo kimi ukuthi inkampani izosebenzisa u- $ 5k kuya ku- $ 100k ebukhoneni obusha bewebhu kepha yeqe ukuchitha amadola angamakhulu ambalwa
IGoogle Yenza Izithombe Zesizinda Somphakathi Zibukeke Njengesitokwe Sokuthwebula, Futhi Lokho Kuyinkinga
NgoLwesithathu, Juni 21, 2017 NgoLwesine, Juni 22, 2017 USerban Enache
Ngo-2007, umthwebuli wezithombe owaziwayo uCarol M. Highsmith wanikela ngomlando wakhe wokuphila konke ku-Library of Congress. Eminyakeni edlule, uHighsmith wathola ukuthi inkampani yezithombe zamasheya i-Getty Images yayikhokhisa imali yamalayisense ngokusetshenziswa kwalezi zithombe zomphakathi, ngaphandle kwemvume yakhe. Ngakho-ke wafaka icala lokuthola imali eyizigidi eziyizinkulungwane zamaRandi, efuna ukwephulwa kwelungelo lobunikazi nokusola ukusetshenziswa kabi kabi kwezithombe ezingaba ngu-1. Izinkantolo azizange zimelane naye, kepha zaxhasa yena